My carruurnimada aan waligood - Gabar, qayb ka gooyey intii toddoba | Apg29
My carruurnimada aan waligood - Gabar, qayb ka gooyey intii toddoba
Wiil albaabka xiga Tony aan ilmo wanaagsan. Early in our carruurnimada, wuxuu bilaabay inuu caayo oo soo dhaadhac oo ii riixdo. Haa, waxaa lagu dhawaaqaa xoogsheegashada, ma ahan oo keliya waxa loogu yeero irritant caadi ah.
Mana aha oo kaliya erayada, laakiin sidoo kale la taaban karo. hoos Wuxuu ii riixay oo sida caadiga ah aan la midba midka kale dagaal, laakiin waxa uu had iyo jeer ku guuleystay maxaa yeelay, wuxuu ahaa iga xoog badan.
Iyo in uu ku ogaa oo ku saabsan, sidaa darteed waxa ay noqotay sababta uu dhicin inuu i caayo si ay u muujiyaan in ay ka sarreeyaan oo xoog i kor.
Waxa uu ahaa da 'la mid ah sida aniga iyo saaxiibkay run ahaantii noqon lahaa. Si kastaba ha ahaatee, saaxiibada sida u baahan cadaawayaashaada ma, qof asal ahan.
Tan iyo markii aan ahaa undanskuffad hore, xoogsheegtay iyo quudhsaday aabbahay foster by in aanan wax kale ma oga. Waxa ay ahayd sida haddii aan u maleeyey in ay ahayd arrin iska caadi ah in aan waa in la yeeshay. Oo foomkan xoog ay sii wadi doonto in siyaabo kala duwan ay soo maleegay kala duwan galay qaangaarnimada.
Waxaa muhiim ah in la yidhaahdo ee macnaha in walaalkay foster Ingemar marnaba xoogsheegtay ama si xun iila dhaqmay. Laakiinse waxaannu ahayn sidii walaalihiis caadiga ah waa sida inta badan. Waxaan tetades ku jahaaday jidka dhex walaalaha.
Mid ka mid ah waqti Waxaan doonayay in ay dhegeystaan ​​cake dhagax weyn oo aan jeclaa aad u badan ah. Waxay ahayd soundtracks jir ah in English, si aanan fahmin wixii la yidhi, laakiin waxaan doonayay inuu ku dhejiyey lådgrammfon duug ah sida kor cranked iyo ilaa sofiitada waxaan ahaayeen.
Waxa uu horumariyo disc, laakiin waxaan u maleeyay in ay ahayd, sidaa daraadeed waxa uu ahaa ehelu naarka na dhex yaal. Ugu dambayntii Ingemar si waalan oo uu ku dhacay album ee madaxayga si ay u kala jejebiyey galay kun xabbadood. Markaas ayaan dheeraad ah si disc ma maqli kari waayay.
Mar kale Ingemar ku shubtay weel soy oo dhan madaxa u taliya dadkayga si aan timo degay jeestay gabi ahaanba cas. Marka la soo koobo, Waxaynu noqonnay sida walaalaha caadiga ah mar walba!
Laakiin Tony ma ahaa nooca.
Mid ka mid ah wakhtiga Tony, aniga iyo carruurta kale inay ku dabaashaan hoos goobta dabaasha ee Skeen ah. Waxay ahayd a kiiloomitir yar waxaa si aan ahaayeen baabuur by eryay. ma aan haatan soo xusuusta kuwaas oo ay ahayd in ay na laakiin hooyada Tony ee Effie eryay noo kaxayn lahaa.
Inta aad dabaalan caayo, la diriray, dagaalami iyo riixay ii Tony hoos. Waxaan ku qayliyey oo ahaa mid aad u murugo leh. Waxaan dareemay in si xun oo waxa aan ahaa at dhan funny. Waxaan dareemay run ahaantii ku saabsan inay ku maydhato iyo dabaalan. Later waxaan si casharo dabaasha tegi lahaa, oo waxay qaadan noocyo badan. Xitaa barahaaga dahab ah markii aan wax yar ka weyn.
Effie yimid oo na soo gaaray oo uu drive gacantiisa midig Volvo in ay ka shaqayn jirtey markii ay baabuur-wadidda soo galo. Marka aynu carruurta kursiga dambe fadhiistay, ayay naga weydiiyo:
"Ma waxaad u lahaa xiiso leh?"
"Haa," ayuu si dhakhso ah ugu jawaabay.
Oo waxaa runtii aad ayaan u murugo, niyad, diiday oo dareemay xun laakiin kuma uu dhicin odhan. Anigu ma aan fahmin sida uu odhan kari waayeen in aanu lahaa xiiso leh markii aan dareemay in si xun loo si qaawan. Uma aan lahaa xiiso leh.
Waxay ahayd in markii labada Rune guriga, Tony iyo qaar badan oo kale ka dib ayaa sidoo kale ii si xun ula dhaqmaan lahaa, waxaan jirin mid u jeedin lahaa. Waxa aan ahaa in aan kuu sheegi karo, waayo, waxaan runtii ma oga, in aanay ahayn wax caadi ah iyo in aad cid sheegi kartaa in ay ka fogaadaan dadka silciya.
Later waxaa soo baxay in aan weli lahaa madax xanuun. Waxa ay aheyd madax xanuun daran. Sidaa daraadeed, waxaan la dhigay isbitaalka toddobaadkii inay i imtixaama lahaa.
Xitaa markii aan caayo by ilmo kale oo xanuunsan kaas oo sidoo kale ahaa waayo, dhib baa qaar ka mid ah. Waxaan qabaa inuu ahaa cusub ee ku shaqeeya wax.
Waxa ay u muuqataa in marka aad sidaas u nugul, oo kuwa la dulmay, niyadjab, saxariiriyo oo diiday waxaan ku ahaa sidii ilmo oo aad barbaro in boocsadahana ah. Waa sida haddii digayaan, "kaalay oo i caayo!" ka dibna boocsadahana warqad in boostada. Waxay xitaa ma garanayaa kii aad tahay iyo in aad tahay wax caaya, waxaad kaliya iyaga soo jiidan. Waa sida jaray digaagga ee henhouse ah. Qof doonaa mar walba loo soo bandhigi iyo in qof ii ahayd.
Oo waxay u sameeyeen badan oo baaritaan igu on. Marka, ka dib markii baaritaan, waxaan dareemay si xun in aan u turaha u galay qolka khalad by wareer iyo i saaray qof kale ee sariirta. ka dibna shaqaale ee u yimid oo u sheegay in aan ku jiray qolka qaldan. Waxaan eegay hareeraha qolka oo wuxuu ku yidhi:
"Haa, waan ahay."
Markaasuu tegey, oo waxaan aan qolka wixii qummanaa socota, waxa uu. Laakiin waxba iga qaldan, waayo sababta fudud helay in ay jirto wax iga qaldan. The madax laga cabsado oo aan ka soo gaaray ay sabab u ahayd wax kale oo gebi ahaanba.
Waxaan la dagay by madax ee sanadaha soo socda iyo sidoo kale galay qaangaarnimada.
Later, markii aan dugsiga bilaabi lahaa waxaa u muuqday badan tahay in aan dareemay xun sidaa darteed waa inaan si nafsi ah u tagaan. Waxaan qabaa ma jirin kuwa diyaarin inaan dhammaadkeedu nafsiga ah. Laakiin waxaan si cad uma tarin dhibaatada dhigay ay igu jirin.
Ma xusuusan wixii aan ka wada hadalnay, laakiin waxaan u sheegay in aan isaga loogu balan qaadayo in aan dhibbane u xoogsheegashada iyo cabsi nafsi ah, oo labadoodaba waxaa ka fog guriga, dugsiga iyo waqtiga firaaqada. Waxaan u maleeyay in ay ahayd wax caadi ah in ay noqon doonto oo keliya.
Maanta, waxaa lahaa marnaba ka tageen. Markaas maamulka uu qabsaday waxaa ka mid ah isla markiiba. Waxaan u lahaa waayo, kolka hore ee abid soo degay guriga this foster. Laakiin waxaa jiray marar kale. xeerarka kale ee ciidamada. Caruur badan ayaa ka dhammaaday daryeelkii foster ayaa loo isticmaalaa sida shaqada, taas oo aan foster walaalkiis Ingemar ahaa. Laakiin marna ma waxaan u ahaa sabab kasta ma faa'idaysto sida shaqada. Halkii, waxaan ka Faydatay Dhudhumadeeda daabacan, loola dhaqmo by grimaces fool xun, waxaana la sheegay in waqtiga iyo mar kale:
"Tag guriga si Stockholm, aad brat."
Waxaan marna runtii xoogsheegtay waxaan sababtoo ah ma Gaarna la hadli kartaa. Waxaa jiray sababo kale oo seefqaad ah goobasho Xiiso. Sababta oo ah in aan la hadli kartaa nadiif ah, oo aan hore idiin sheegay, waxaan u lahaa in ay soo degin inuu soo Växjö koorso hadalka ah in hal todobaad. Rune soo dhaadhac oo ii eryay. kooxda Växjö lix mil ka our beerta.
On habka ay u Växjö Rune balan qaaday in uu soo iibsan lahaa soda ii, laakiin sabab qaar ka mid ah, wuxuu dhawray marnaba yabooho. Tani ma aha markii ugu horeysay ee uu yabooha i kala jejebiyey. Markii aan u yimaadeen Växjö iyo Rune guriga tegey si uun ku dhawaaqay oo aan ka badan yabooha qiyaamay qayliyey.
Shaqaalaha, ma aan ogayn waxa ay samaynayaan igu. Laakiin ka dib markii su'aalo badan oo luskande garteen in aan rabay soda. Waxaan lahaa qaar ka mid ah lacag iga leh si ay iyagu karo aan lacag si ay u iibsadaan soodhaha qaar ka mid ah ii. Markii aan helay soda ah waxaan doonayay inaan uga mahad gacanta, waayo, waxaan la baray inay sameeyaan, laakiin waxay ku yidhaahdeen:
"Uma baahnid in aad u mahad, waayo, waxaad u bixisay."
Haddii kale, anigu ma xusuusta wixii dhacay Dabcan hadalka, laakiin waxaan bartay ugu yaraan ma Gaarna hadasho.
serial Tani waa sheeko naftayda ka carruurnimada iyo wixii ka dambeeyey. Waxaan idinku leeyahay, iyagoo qaawan oo daacad. badan, weligay ma aan idiin sheegay oo ku saabsan ka hor.